I-POLYESTER COUCH PROS KUNYE NECONS - IFANITSHALA
Eyona Ifanitshala I-Polyester Couch Pros kunye neCons
I-Polyester Couch Pros kunye neCons
Nantsi eyethu isilingi se-polyester kunye nesikhokelo sokubandakanya kubandakanya nokuba yintoni, iintlobo ezahlukeneyo kwaye nokuba lukhetho olufanelekileyo kuyilo lwegumbi lokuhlala lakho. Izingqengqelo zePolyester zizinto ezinokuthanani nefenitshala ekhayeni lakho. Banokufunyanwa nge-100% yelinen ye-polyester okanye edityaniswe nezinye izinto ukwenza isofa yomeleleyo kwaye ifikeleleke.
Yintoni isingqengqelo sePolyester?
Ipholiyesta yeCouch Pros
Ipholiyesta yeCouch Cons
Ngaba iPolyester ilungile esofeni?
Ngaba i-100% yePolyester ilungile kwiSofa?
Okokuqala kwaziswa ngo-1950, i-polyester yintsebenzo ephezulu yokwenza i-microfiber esetyenziswe njengelaphu lokuphinda lisetyenziswe ngezinto zendalo ezifana nekotoni kunye noboya.
Inkqubela phambili kwitekhnoloji yenze inkqubela kwimvakalelo, ukubonakala kunye nokujonga kwepolyester. Namhlanje, ipholiyesta inokuziva kwaye ijongeka ngathi yisilika yokwenene kunye noboya.
I-Polyester yenye yezona zinto zingabizi kakhulu ezilukiweyo zihlala zidityaniswa nezinye iifayibha ukuze yenze into enganyangekiyo ukushwabana, ityumke kwaye iphele. Kukwaluncedo njengelaphu langaphandle kunye nezinto ezintle zesofa kunye nezilayidi. Bona Okuninzi iintlobo zamalaphu esofa Apha.
Ixabiso - Isingqengqelo sepholiyesta sinexabiso elifikelelekayo kakhulu xa kuthelekiswa nezinye iisofa ezisendlwini zendalo kuba zitshiphu ukuzenza. Ipholiyesta edityaniswe nekotoni yexabiso eliphantsi kune-100% yelaphu yomqhaphu.
Ukuzinza - Isingqengqelo se-polyester sithambile, sikhululekile, kwaye kulula kakhulu ukusicoca. Ikwanomgangatho onganyangekiyo wokurhabaxa owenza ukuba uhlale ixesha elide.
Ipholiyesta inokumelana nomonakalo ongaphezulu kwezinto zendalo. Nangona ingenako ukuwumisa wonke umonakalo onokubangelwa zizilwanyana zasekhaya, iya kuyichasa ifuthe leenzipho zayo kunye nokulunywa ngcono kunezo zemicu yendalo. I-Polyester iyamelana nokuzolula kunye nokuncipha xa ihlanjwa.
Ixhathisa ukuphela - Isingqengqelo se-polyester sinokumelana nombala kwaye sinokumelana nemiba ebunayo elangeni okanye ekukhanyeni kokukhanya.
Ukunganyangeki kwebala - Ingubo yePolyester iya kumelana namabala angcono kunezinto zendalo kuba iyakhawuleza ngokukhawuleza kwimeko yokuchitheka.
Ukuphefumla - Ilaphu lePolyester alizukufunxa amavumba kunye nokuthintela ukubila ngenxa yomgangatho ophefumla ngakumbi.
I-Polyester ivumela ukufuma ukuba kutsalwe ngaphezulu kwaye kuphume phantse kwangoko. Ngokudibanisa umqhaphu kunye nepolyester, ufumana uvakalelo oluthambileyo lwelaphu kunye nokuluka ngakumbi xa usaphefumla.
Izinto ezingezizo ze-allergenic
Isingqengqelo sePolyester ngokwendalo sisimo sehypergenic. Kukho umngcipheko omncinci wokukhula komzimba kwi-polyester couch kunaleyo yokusebenzisa izinto zendalo ezinje ngoboya kunye nomqhaphu odala eyona nto ibangela oko.
Izinto zendalo zinokungabikho komzimba ezinokufumaneka kuzo ezinje nge-pollens ezinokuhlala kwimicu yokupholisa. I-Polyester ngakolunye uhlangothi, inemiba embalwa ye-sediment kuba i-weave eqinile.
Olunye uphawu olungileyo lwepolyester kukuba inokudityaniswa nezinye iifayibha ukuze ufumane izibonelelo zombini zendalo kunye nezinto ezenziwe ngokudibeneyo. Xa uthenga isofa kule mihla, zininzi iindlela zokudibanisa onokukhetha kuzo ezinje ngesilika, uboya, okanye i-rayon.
Izingqengqelo zePolyester zinokuphinda zibonakale kwaye zibonakale zesikhumba ngaphandle kwexabiso lentengo. Unokuqiniseka ukuba iya kuhlala ixesha elide, ikwafumaneka kwiitoni zomhlaba ezityebileyo ezifana nesikhumba kunye nesingqengqelo sepholiyesta esinemicimbi embalwa yolondolozo kunesikhumba. Bona Okuninzi ukhetho lombala wosofa kweli phepha.
Kukho ukomelela ngakumbi kulwakhiwo lwelaphu le-polyester, okuthetha ukuba unokuyiphepha imbonakalo ye-saggy ebonakalayo kwizingqengqelo ezenziwe ngomqhaphu okanye uboya. Isingqengqelo sePolyester sinokugcina ubume bayo ngcono.
Isingqengqelo samalaphu se-polyester sihlala siza nesimboli ye-W enokufumaneka kwithegi yomenzi wabo; oku kuthetha ukuba unokucoceka ngokulula kwaye ugcine ukhuko lwakho lwamanzi ngaphandle kokonakalisa i-weave yayo.
Ukuthambisa ioyile - Isingqengqelo sePolyester sinika ukunganyangeki kokutya okunamafutha kunye nonxibelelwano lweoyile. Nokuba ioyile eluswini lwakho inokushiya amabala asisigxina esofeni - izandla neenyawo ezinamafutha ziphezulu kuluhlu.
Ukubaleka kunye nokutsala - I-polyester epholileyo yexabiso eliphantsi inokubaleka kunye nokutsala ingxaki xa ivezwe kukungonakali rhoqo. Njengoko iifayili zikhululekile kwi-weave yazo, yenza ukuba kungabonakali kakuhle ifenitshala yakho.
Imicu yendalo inesabelo sayo sokubaleka kunye nokutsala okuninzi njengeentsinga zokwenziwa, kodwa ipholiyesta inomdla wokufumana umonakalo ongaphezulu kwexesha.
Ezimileyo - Njengohlobo lwendwangu yokwenziwa kwezinto, kukho isixa esithile sombane ongashukumiyo ogcinwe kwizingqengqelo zepolyester. Le ntlawulo ye-tuli iya kwakha ngokuhamba kwexesha kwaye iya kuhlala ibeka umngcipheko kuhlobo oluthile lwamava othusayo.
Ukuphepha izinto zokuhambisa kufutshane nakwizingqengqelo zepolyester kunokunciphisa umngcipheko ngakumbi. Ngokugcina inqanaba elifanelekileyo lokufuma ekhayeni kunokubuphelisa obu bubi.
Cinga ukunxiba izihlangu ezenziwe ngerabha okanye izihlangu xa uhleli okanye uziphumlele kwisofa sakho se-polyester kunokunceda ukunciphisa umngcipheko.
Ngenxa yombane ongagungqiyo oveliswa ngumbhede we-polyester, uya kutsala amasuntswana amaninzi kunye neenwele zasekhaya, iingubo kwimpahla yakho. La masuntswana anokungena kwi-weave ye-upholstery enokuba yingxaki xa ucoca isofa.
Ubushushu bubuthathaka - Kuba i-polyester inemicu eyenziweyo, isesichengeni sobushushu. Inqanaba lobushushu bonyamezelo alukho kwinqanaba elifanayo nelo lezendalo.
Xa isetyenziswa njengendawo yokugcina izinto esofeni, amalaphu e-polyester anokucula aze atshise aze anyibilike xa sele evezwe kuyo nayiphi na imithombo yobushushu okanye into eshushu egalelwe izinto zokuthambisa.
Isingqengqelo sePolyester sithambekele ekuzoluleni ngokuhamba kwexesha ngenxa yokuba iipolyesters ziyaqina. Xa evezwe kuxinzelelo oluphezulu, ulusu lwelaphu le-polyester luyaxobuka kwinto yangasemva ebangela isiphumo esonakalisayo. Kwakhona, ukuba lithe lavezwa kumaqondo obushushu ahlukeneyo, eli laphu lisenokuqhekeka.
Jonga le sofa yepholiyesta yanamhlanje kwi Amazon [ikhonkco elinyusiweyo]
Njengoko sele kukhankanyiwe apha ngasentla, ipholiyesta inikezela ngezibonelelo ezininzi njengelaphu elenziswayo njengokuqina kwayo ukuma kakuhle elangeni nasekusebenziseni imihla ngemihla. Ihlala i-colorfast kwaye iyamelana namabala asekwe emanzini.
Ngokwokomelela, ibambe ubume bayo ngcono kunamalaphu okwenziwa kwempahla yomqhaphu ethintela ukubukeka okungaqhelekanga kubonwa rhoqo kwizingqengqelo njengoko zikhula.
Nangona isengozini kubushushu obugqithisileyo okanye kukutsha, isofa ye-polyester yomelele kakhulu, intofontofo, ithambile kwaye inemicu engasindi. Amalaphu zokwenziwa ezifana ipholiyesta badla ukuba kubiza kancinane kwaye kulula kakhulu ukuba ukucoca.
Ngophuhliso lwayo lwangoku kunye nophuculo oluqhubekayo, ilaphu le-polyester liye laba yindawo esecaleni e-eco-friendly kwaye iye yaba zizitulo ezithandwayo ezikhethiweyo ngenxa yokusebenza kwayo okuphezulu njengelaphu lokuphakamisa.
Ipholiyesta inokuphinda yenziwe kwakhona ukuze yenze imicu emitsha; ifayibha yepolyester, umsonto kunye nelaphu zinokuphinda zisetyenziswe. Ngokungafaniyo nezinto ezicocekileyo zeplastiki, ipholiyesta iyabola nangona kuthatha ixesha kodwa ekugqibeleni bayayenza.
Kwaye ke, ukuba ujonge ukhuko olufanelekileyo ngexabiso elifikelelekayo, isingqengqelo se-polyester lolona khetho lufanelekileyo kwikhaya lakho.
Ngokwesiqhelo, amalaphu e-polyester ayi-100 ayizukupilisi, ayizolulwa, ayimelani nebala, ukungunda, ukungunda kunye neencukuthu. Xa isetyenziswa esofeni okanye esofeni, i-100% ipholiyesta inokubonelela ngamava enduduzo.
I-Microfiber yipesenti ezili-100 zepolyester enelaphu elinama-multi-weave eliqulathe imicu ye-polyester ecekeceke kunye nenqwelomoya engafakwanga. Inonyango lonyango olungaphezulu olwenza ukuba ibe lukhetho olusebenzayo kusofa osetyenziswayo. I-Microfiber inegama elihle malunga nokugcinwa okulula kunye nokucoca kwaye lukhetho olukhulu kwisofa ukuba unabantwana kunye nezilwanyana ezifuywayo.
usebenzisa nini ms okanye mrs
Kuwo onke amalaphu enzelwe ubunjineli, i-100% ye-polyester yenye yelaphu lesofa elihlala likho kwimarike. Le nto inokulinganisa amalaphu amaninzi; iyamelana namabala kunye nolwelo ngenxa ye-fiber yayo ye-ultra-fine eboshwe ngokuqinileyo.
I-Polyester yinto ekhethekileyo yokukhetha i-upholstery esetyenziswe kwi-sofas nakwezinye iifenitshala nangenxa yobume bayo bokuqhathaniswa nokuthelekiswa nabalingani bayo bendalo kuba ineenzuzo ezininzi.
I-Polyester yinto enkulu, efikelelekayo yokufakelwa kwendwangu enokuhlala ixesha elide nokuba isetyenziselwa ifanitshala yangaphakathi okanye yangaphandle. Ilaphu lePolyester linobuntu balo; Ubume bayo bunemvakalelo entle. Sincoma ngokuqinileyo ukuba uthathele ingqalelo ukuthenga ifenitshala ngelaphu elenziwa ngeplastikhi kwikhaya lakho.
Ukufumana umxholo onxulumene noko ndwendwela igalari yethu eyahlukileyo iintlobo zezitayile zesofa .
iikhitshi ezineziqithi ezibini
Umsesane wedayimani wokuzibandakanya nesafire
yintoni isifungo somtshato